Amagama ka-sage, umcabangi omkhulu kanye nomqapheli wase-Afrika | KONGOLISOLO
Kuthunyelwe ngu: Admi1ku: Juni 24, 2017 00: 35 Awekho amazwana
* Ama-Buffalos abulala abantu abangu-7 unyaka ngamunye. *
* Amabhubesi abulala abantu abangu-500 ngonyaka *.
* AmaHizi abulala abantu abangu-800 ngonyaka. *
* Izicabucabu zibulala abantu be-5000 unyaka ngamunye. *
* Ama-Scorpions abulala abantu be-7000 unyaka nonyaka. *
* Izinyoka zibulala abantu abangu-10000 unyaka ngamunye. *
Izinambuzane zibulala izigidi zabantu ezingu-2,7 unyaka ngamunye. Yebo, abancane yibo ababulala kakhulu!
* "Izono" ezincane, ezingabonwa kalula ngabaningi, ezibulala kakhulu empilweni yakho yokomoya. *
* Gwema izizathu zokungakhuleki nokunikeza isikhathi esithile sosuku lwakho kuMdali wakho. *
* Izono zokushiya zibulala nje njengezono zokuthunywa.
* Ukuhleba nokuqamba amanga amancane, kwenziwa ngokuphindaphindiwe futhi kuyingozi. *
* Qaphela kulabo abancanyana abakwenzayo nsuku zonke. Bazokuletha ukuwa kwakho. *
Abantu abaphumelelayo banezinto ezimbili ezindebeni zabo, "ukumamatheka nokuthula".
- Ukumamatheka kungaxazulula izinkinga, ngenkathi
- Ukuthula kungazigwema izinkinga.
Ushukela nosawoti kungahlanganiswa ndawonye
Kodwa izintuthwane zilahla usawoti futhi zithwala ushukela kuphela.
* Khetha abantu abafanele ekuphileni futhi wenze impilo yakho ibe ngcono futhi ilula.
* Uma ungaphumelelanga ukufeza amaphupho akho, shintsha izindlela zakho, hhayi uMdali wakho. *
* Khumbula, izihlahla zishintsha amaqabunga awo, hhayi izimpande zawo. *
* Awusoze wafinyelela lapho uya khona uma ume futhi uphonsa ngamatshe inja ngayinye ekukhonkotha. *
* Abazondayo bazokubona uhamba phezu kwamanzi bese bethi kungenxa yokuthi awukwazi ukubhukuda. *
* Noma udansa phezu kwamanzi, izitha zakho zizokusola ngokusongela uthuli. *
* Kwenze kube isifiso sakho sokuphila impilo ethule, unake ibhizinisi lakho bese usebenza ngezandla zakho. *
Khumbula, ungalokothi ulwa nengulube. Nina bobabili ningcolile, kodwa ingulube izoyiqonda.
- Uma kufanele uphuthelwe noma iyiphi indawo, ungaphuthelwa isibhakabhaka
-Uma uphuthelwe yisivumelwano, sicela ungaphuthelwa ukususwa
- Uma kufanele uphuthelwe noma yisiphi isidlo, sicela ungaphuthelwa isidlo sakusihlwa somshado wewundlu
-Isiphelo asisondele; kulapha